VIDEO CUSUB: Daawo tan ku dhacday wariyaal u dhashay Australia oo isku dayay in ay filim ka sameeyaan Rinkeby | Somaliska
Wariye iyo sawir qaadeyaal ka socday telefishin lagu magacaabo Channel 9 ee Australia ayaa waxaa ku dhacday arin la yaableh ka dib markii ay tageen xaafada Rinkeby iyaga oo la socda koox cunsuriyiin ah oo Swedish ah. Wariyaasha u dhashay Australia aya markii ay tageen xaafada Rinkeby waxay bilaabeen in ay video ka duubaan taasoo ay dhibsadeen qaar ka mid ah dhalinyarada xaafada.
Dhalinyarada ayaa durbadiiba bilaabay in ay waxyaabo ku tuuraan sawir qaadaha, iyadoo markii dambe gacanta layskula tagay. Goobta ayaa waxaa waxyeelo ka soo gaadhay labo ka mid ah kooxdii wariyaasha. Booliska ayaa loo wacay iyadoo ay markaasi ka dib ay dhamaysteen shaqadooda.
Waxaa wanaagsaneed in lalasocodsiiyo oo loosheego maxaayelay kamira in laiskaqaato sawir iyo duubitaan laiskamabilaabo weliba ayagii fikirkooda ah in eey waxbahdilaan marka dhalanyarada in eey saan udhaqmaan waa wargelin la,aanta iyo xushmad la,aanta laguladhaqmay, waa fikirkeyga mahadsanit.
chanalkee lagasoo deynayaa axada jimcaale?
Waxay ku dhaqmen dhalinyarada wa wax ad uu xun, aniga Stockholm daganahay garahaan xafada Barkarby, wax ficnad hadi ayna rabin dhalin yarada in ay iskaga amusan kaso turaayna wa dhaqan xumada somalida lagu yaqan, ama cunsuri ha ahado qofka qada ama mid an ahan, in ad wanagaga mujiso aya ficaan, wana dhaqan xumo waxas oo kale,